Kuwa jecel Disneyland, miyaad ku bixin laheyd 600 $ dhegaha dhagaha Heidi Klum Minnie Mouse? - dadka - KU SOO DHAWEYN
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Kuwa jecel Disneyland, miyaad ku bixin laheyd 600 $ dhegaha dhagaha Heidi Klum Minnie Mouse? - dadka
Kuwa jecel Disneyland, miyaad ku bixin laheyd 600 $ dhegaha dhagaha Heidi Klum Minnie Mouse? - dadka
Dhegaha madaxa ee Disney, oo uu naqshadeeyay Heidi Klum, waxaa lagu iibin doonaa Disneyland, Disney California Adventure iyo Downtown Disney. (Iyadoo leh ogolaanshaha noocaas ah ee Disney)
Muuqaalka cusub ee dhegta Minnie Mouse, wuxuu ka kooban yahay wax ka badan 150 dhalaalaya Swarovski kiristaanka oo loogu talagalay garsooraha Got Talent ee America iyo moodada, Heidi Klum, waxaa lagu sarreyn doonaa qiime qaali ah: 600 $.
Klum waxay saxeex doontaa dhegaha madaxeedkeeda Disney Parks Collection ee Dukaanka Dharka ee Dabaqa Hoose ee Sabtida 28 Sebtember laga bilaabo 14h illaa 16h
Waan joogi doonaa @disneyland Sabtidan 28 sebtember laga bilaabo 2 - 16 saacadood si loogu dabaaldego bilaabida dhagaha jiirka #DisneyParksDesignerCollection ! Ma sugi karo inaan ku arko dhammaantiin! @disney @shopdisney pic.twitter.com/WcR7o5ZMMg
- Heidi Klum (@heidiklum) 25 September 2019
In kabadan 500 xadka Klum dhagaha loogu talagalay ayaa laga heli doonaa Disneyland, Disney World iyo ShopDisney.
Dhegaha 'Heidi Klum' ee 600 $ waxay ku biirtaa ururinta gaarka ah ee muujineysa abuurista caadooyinka ah ee ka imanaya dadka caanka ah, nashqadeeyayaasha moodada, masawiro, naqshadeeyayaasha garaafyada iyo xitaa Walt Disney Imagineers. (Iyadoo leh ogolaanshaha noocaas ah ee Disney)
Klum wuxuu ka tagey riwaayadihiisa "Mashruuca Runway" ee riwaayada ee 'Bravo' ee 'bandhigga goynta' cusub ee 'show-ga' ee 'Amazon' Waxay ku noqon doontaa garsoore xilli 2 ah "Amarada Got Talent America: Champions League".
Supermodel wuxuu noqday xiddigga TV-ga wuxuuna muujiyey isbeddelka naqshadeynta dhegaha dhegaha ee muuqaal gaaban oo lagu soo qoray Twitter.  Waxaan lahaa naqshad aad u xiiso badan oo loogu talagalay naqshadeynta #DisneyParksDesignerCollection . Qaabka quruxda badan ee Mickey & Minnie ayaa i dhiiri geliyay oo waxaan damacsanahay xoogaa ujeedooyin ah, way igu adkeyd inaan mid dooro! Dhagahayga dhalaalaya ee dhalaalaya ayaa la daabici doonaa bisha Sebtember! mahadsanid @disney waa sharaf #Ad pic.twitter.com/myT8s6fTuI
- Heidi Klum (@heidiklum) 13 May 2019
Dhegaha Klum ee ka soo baxa 600 $ waxay ku biiraan ururinta gaarka ah oo ay ku jiraan abuurista caadooyinka ah ee naqshadeeyayaasha moodada Vera Wang, Farshaxanka sirta ah ee Victoria Karlie Kloss iyo majaajilistaha xiddiga iyo hal abuurka adduunkeeda Ashley Eckstein. Dhegaha kale ee aruurinta waxaa loo qaabeeyey Alex iyo Ani (178 $), Betsey Johnson (58 $), Harveys (58 $) iyo Shag (58 $). Disneyland waxay ku iibisaa koofiyadaha caadiga ah iyo guntimaha madaxa ee kaliya 20 USD.
Iskuxiridda Disney Parks Disney Park Taxanaha waxaa ka muuqanaya Mickey iyo Minnie koofiyadaha iyo baalalka madaxa ee loogu talagalay dadka caanka ah, nashqadeeyayaasha moodada, masawiro, naqshadeeyayaal garaafyo iyo xitaa Walt Disney Qiyaas. bil kasta ilaa xagaaga 2020.
Mickey iyo Minnie's Edition Edition xadidan Mickey iyo Minnie Collection oo ay soo jiidatay jilayaasha Disney iyo jiidashada ayaa lagu iibin doonaa New Century Jewelry ee Disneyland, Elias & Co. ee Disney California Adventure iyo Dukaanka Dharka Disney ee Disney.
Davido wuxuu ku dhawaaqay sii deynta wada-shaqeyntiisii ​​labaad ee Chris Brown toddobaadka dambe!
Geerida Jacques Chirac: "Bernadette, wuu ka baqay oo wuu u baahnaa"